Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara pegmatite | Netwọk Mgbasa Ozi
N'etiti ụdị nkume na-adị n'ụwa, enwere otu ihe mara mma ma na-agakarị n'ọtụtụ akụkụ ụwa. Ọ bụ ihe gbasara pegmatite. Ọ bụ njirimara maka nnukwu ọka ya, karịa 20 mm. Nọmalị ọka size dị nnọọ obere na nkume. Ọ bụ ụdị nke ugwu mgbawa ugwu na-esite na ngwa ngwa jụrụ na nkwenye nke magma.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe e ji mara oke okwute a, ihe ji ya eme na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
2 Pedị pegmatite
3 Mmalite nke pegmatites
4 Kacha Ugboro ojiji
Nkume a dị n'ime akwara ndị dị omimi mgbe anwuru magma siri ike site na ngwa ngwa jụrụ oyi. Ọ na-abụkarị akụkụ nke quartz, orthoclase feldspar na ndị ọzọ mineral ngwa dika Muscovite. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkume ọ bụla anyị nwere ike ịchọta mineral dị iche iche site na isi mmalite dị iche iche. N'ebe a, anyị nwere ike ịchọta oxide na mineral silicate ndị na-adịghị ahụkebe. A na-akpọ ndị a columbite na coltan.
N'ime otu pegmatite, enwere ike ịmịpụta ụfọdụ n'ime mineral ndị a kacha achọsi ike na ụlọ ahịa dị n'akụkụ ụwa niile. Ha bụ ndị a na-akpọ nkume dị oke ọnụ dị ka topaz, tourmaline na aquamarine. A na - achọkarị mineral ndị a n'ihi nkwenye ha nwere banyere ike ime mmụọ ha. A na-eche na site n'itinye ụfọdụ olu ma ọ bụ ọla aka na mineral ndị a, chakras ga-enwe ahụ ike karị, ha na-arụkwa ọrụ ha nke ọma.
Agba nke pegmatite doro anya, n’etiti ọcha na pink. Enwekwara ụfọdụ agba ntụ na agba. O nwere kristal buru ibu na ejima ịbanye. Mgbe a na-enyocha ihe owuwu nkume, nke ọ bụla nwere ihe dị iche. Otú ọ dị, mgbe anyị na-ezo aka na pegmatite, anyị na-achọpụta na nhazi ahụ pụrụ iche. Beendị ụdị a ka enyere aha nke pegmatite.
Dị ka nkume ndị ọzọ dị na Philolian, kristal ha anaghị adịkarị n'otu. Nke a bụ n'ihi ngwa ngwa ngwa ngwa nke magma na veins. Tụkwasị na nke ahụ, okwute na-apụta n'ụdị na ọnọdụ dị iche iche na, dabere na oge ha, ọ ga-enwe otu ụdị ma ọ bụ ọzọ. Kristal enweghị oge iji mepụta nke ọma, ya mere ha nwere usoro na-adịghị agbanwe agbanwe.
Nkume a na-ebute dikes, akpa na akwara n'ime ugwu mgbawa. A na-ejikọkarị ya na granite.
E nwere ọtụtụ ụdị pegmatite dabere na ihe kachasị mkpa na mineral n'ime ya. Nke mbụ, anyị na-ezute pegmatite granite. Site na aha ya anyi nwere ike ighota nke oma na o nwere otu mineral dika granite. Nke a bụ otu n’ime ihe kpatara ya ji emetụta ya ọtụtụ mgbe.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ụdị pegmatite ọzọ a maara dị ka syenitic. N'ime ụdị okwute a anyị na - ahụ ihe alkaline nke emepụtara na ọnọdụ dị iche iche. N'ikpeazụ, anyị nwere gabbroid pegmatite. Aha a na-ezo aka n'eziokwu bụ na ihe ndị mejupụtara ya yiri nke nke gabbro. Nkume ndị a niile nwere njikọta ibe ha site n'inwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnọdụ na ntọala.
Agbanyeghị na ngwakọta kemịkalụ dịgasị iche n'etiti ndị ọzọ, enwere ike ịkekọrịta ya dịka otu isi dị iche iche nke pegmatites dị mfe na ndị mejupụtara. Na nke mbụ anyị na-ahụ matrik nke microcline na quartz nke na-eme ka etiti ahụ bụrụkwa nke quartz. Ọ naghị enwekarị mpaghara ịnweta. N'aka nke ọzọ, anyị nwere na ihe ndị mejupụtara, na isi ahụ gbara gburugburu etiti dị n'etiti mgbidi na nsọtụ.
Nkume ndị kachasị ọnụ na nke kachasị mmasị akụ na ụba bụ ndị nwere akwa dị larịị nke nwere ọdịiche ịnweta. N'ime mineral ndị a, anyị na-ahụ feldspars, albite, muscovite na quartz.
Typedị pegmatites ndị ọzọ na-emeghachi omume na ha bụ ndị na-adabere na ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide nke e guzobere ha. Na nhazi ndị a, anyị na-ahụ ụdị pegmatites abyssal, micaceae na ndị nwere obere ihe. E tinyela myorolytics na ndepụta a enwetara na okpomọkụ karịa ogo 400, mana nha di iche iche.
Mmalite nke pegmatites
Myarolytic pegmatites bụ ndị a kpụrụ site na metamorphism nke allochthonous granites. Ha bụ ndị nwere ihe dị iche iche nke otu nke lanthanides, sodium na thorium. Abyssal pegmatite bụ nke na-amalite mgbe njikọta akụkụ na-ewere ọnọdụ ma na-agụnye ụwa site na isi mmalite dị iche iche na ya. Ihe ndị ọzọ dị na ogige ụwa ị nwere, ị ga-abawanye uru akụ na ụba na nkume.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkume nkume pegmatite niile sitere na mmiri dị egwu nke nwere nnukwu quartz na feldspar. Iji na-etolite, ha chọrọ ihe ndị ọzọ dị ka mmiri, fluorine, boron na nkume ndị ọzọ na-egbuke egbuke na-etinye aka na-emejupụta mgbawa nke nkume ahụ hapụrụ.
Ihe ndị a niile bụ ihe mejupụtara volatịles ndị na-enye ha ohere ịkwanye n'ime oke okike dị ịtụnanya. E nwekwara ụzọ ọzọ ị ga-esi malite na ọ bụ site na nkume ndị a na-ekpughere ekpughere na nrụgide dị elu. Mgbe nke a mere, quartz na feldspars nke di na nkume di ike rue mgbe ha jikọtara. Mgbe nke a mere, ha na-edegharị ọzọ iji mee ka pegmatite bilie.
Kacha Ugboro ojiji
Dị ka nkume dị raw na obere mgbanwe, pegmatite anaghị eji ya eme ihe. A na-ere ya, ma ọ dịkarịa ala, dị ka granite iji jupụta ụfọdụ elu. Ọ na-eje ozi dị ka akụrụngwa maka imepụta iko na seramiiki. Na ubi nke owuwu nwere ike inwe ọtụtụ ụlọ.
Ekele maka pegmatite ahụ, a ga-amịpụta mica nke eji arụ ọrụ na ngwa elektrọnik dị iche iche na ngwa nyocha ngwa anya. N'ime nkume dị egwu ndị a kpọtụrụ aha n'elu, a ga-amịpụta mkpụrụ nke zirconia, emerald, garnet, aquamarine na apatite, na nkume ndị ọzọ dị oke ọnụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, pegmatite bụ nnukwu nkume na-adọrọ mmasị na, ọ bụ ezie na ọ nweghị ọtụtụ azụmaahịa, ọ nwere ike ịnye ọtụtụ mineral na nkume dị oke ọnụ na nnukwu mmasị akụ na ụba. Enwere m olileanya na site na isiokwu a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nkume a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Pegmatite